Akụkụ temometa nke Mercury, Jiri ya na ihe egwu | Network Meteorology
O doro anya na otu mgbe ị dị obere, a tụlee ọnọdụ ahụ gị mgbe ị nwere ahụ ọkụ ma maka nke a, ha ejiriwo a Temometa Mercury. Ejirila akụrụngwa a mee obere ihe maka ọtụtụ ihe ewezuga iwere na ọnọdụ ahụ. Ebe ọ bụ na ụdị temometa a nwere ihe egwu dị na ojiji ya, ha kpebiri iji thermometers dijitalụ ọhụrụ dochie ya.
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa nke ọma etu o si arụ ọrụ, ihe enyere ya na ihe ọ bụla metụtara temometa nke Mercury.
1 Kedu ihe ọ gụnyere?
2 Ojiji nke mercury temometa
3 Ihe egwu na ihe egwu
Kedu ihe ọ gụnyere?
Emepụtara ngwa a maka ịtụ ọ̀tụ̀tụ̀ na 1714 site onye Poland onye dibia physics na engineer aha ya bu Daniel Gabriel Fahrenheit. Site na aha nnabata a sitere na otutu ihe eji eme ihe. Mgbe e mesịrị, e webatara ogo Celsius dị ka ọkwa ọhụrụ ọzọ.
Igwe ihe onyonyo nke mercury bu oria nke oriọna di nkpari site na tube di omimi, na n’ime ya bu ihe ndi ozo. Olu nke a metal n'ime tube bụ ihe na-erughị olu nke bọlbụ. Ejiri akara na-egosi akụrụngwa ahụ nke gosipụtara ọnọdụ okpomọkụ dabere na nke ọ tụrụ. Nke a na metal na ajụjụ e were n'ọrụ n'ihi na tỌ dị mfe ịgbanwe olu ya ntakịrị dabere na ọnọdụ okpomọkụ.
Ngwaọrụ a kara akara tupu na mgbe oge sayensị gachara. Thermology, nke bụ sayensị na-amụ banyere okpomọkụ, nwere ike inwe nnukwu ọganihu na nke a. A na-ahụta ka taa dị ka otu n'ime ndị kasị mma mepụtara, ọ bụ ezie na a dịghịzi eji thermometers Mercury. Ọnọdụ okpomọkụ ọ ga-anabata dị nnọọ ukwuu. Enwere ike ịgbatị usoro okpomọkụ a site na ntụziaka nke nitrogen ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ gas. Mgbe emere nke a, ọ kpatara mmụba na nrụgide na Mercury mmiri mmiri ma mee ka ebe esi esi.
Ojiji nke mercury temometa
Ugbu a, anyị ga-enyocha ihe ndị o jiri weghara ịwe ahụ ọkụ ma ọ bụrụ na ahụ ọkụ ma ọ bụ ahụ erughị ala. Ejiri ha n’ubi di iche-iche. Ọmụmaatụ, a ka nwere ezinụlọ nwere ya n'ọnụ ụzọ ụlọ iji tụọ ọnọdụ okpomọkụ dị na mbara igwe. N'ọtụtụ ebe, dịka ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ ọpụpụ, ejiri ya tụọ ọnọdụ okpomọkụ nke ndị ọrịa.
Akụkụ ndị ọzọ nwere ike ịbụ ebe ọbara, oven, incubators ma ọ bụ maka nnwale kemịkal. N'aka nke ọzọ, na ụlọ ọrụ, a na-ejikwa temometa na ụlọ ọrụ ike, ịmara ọnọdụ nke ọkpọkọ, na ngwa nju oyi na akụrụngwa ọkụ, ebe a na-eme biya, ihe nchekwa nri, ụgbọ mmiri, ụlọ nkwakọba ihe, ebe a na-eme achịcha, wdg.
N'ebe niile, ọ dị mkpa ịmata uru nke okpomọkụ iji nwee ike ịmịpụta ngwaahịa ma ọ bụ kwado ụfọdụ usoro na arụmọrụ ahụ. Ọmụmaatụ, Ọ dị mkpa ịmata ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri na-agafe na ọkpọkọ na ụlọ ọrụ iji mara ma ọ ga-eme ka ọ dị mma. Ma ọ bụghị ya, enwere ike inwe nnukwu nsogbu. Otu ihe a na-eme achịcha. Ikwesiri ima uru nke okpomoku nke enwere ike ime achicha zuru oke.
Mercury bụ ihe sitere n'okike nke Hg gosipụtara na onwu. Nọmba atọm bụ 80. N'ime ebe a na-ere kol, a ga-ahụ ha n'ime okwute terrestrial dị ka mercury sulfide. A maara onyinye a dịka cinnabar.
Mercury anọwo na-achọsi ike ruo ọtụtụ afọ, ebe ọ bụ na ọ bara ezigbo uru na ngwa ihu igwe dịka baromita, gauges na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka ọkụ, oriọna na ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ. A na-ejikwa ọla a eme ka amalgams eze.
N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ọmụmụ gosipụtara na ojiji nke igwe a enweghị nchekwa maka ndị bi na ya, yabụ ewepụrụ ya nke nta nke nta na temometa ndị ana - ere ahịa ugbu a bụ gallium.
Geratherm temometa ...
APOSAN THERMOMETER NA ...
Ihe egwu na ihe egwu
Ka anyị hụ ugbu a ihe egwu dị na temometa a. Na European Union, egosila na ngwaọrụ ọ bụla nwere Mercury agaghịzi ahịa. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere nnukwu ihe egwu nye ahụike na gburugburu ebe obibi, na-enwe ike imetọ mmiri, ala na anụmanụ.. Na North America etinyego ya n'ọrụ na mpaghara ụfọdụ.
Ihe ize ndụ nke mercury dị na alụlụ ya. Ọ bụ alụlụ na-egbu egbu nke enwere ike ịmịkọrọ mgbe temometa mebiri. Ọzọkwa, mgbe wụsara Mercury, a ga-achịkọta ya ozugbo tupu enwee nsonaazụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ma temometa ị na-eji nwere mercury, ị ga-ahụ ya nke ọma. Ọ bụrụ na mmiri mmiri dị na ya abụghị ọla ọcha, ọ nwere ike ị alcoholụ mmanya ma ọ bụ mmiri mmiri ọzọ nke anaghị enwe nsị ọ naghị ewepụtakwa nsogbu ahụike ma ọ bụ ihe egwu ọ bụla. Akụkụ ọzọ bụ na akara ngwaahịa na-ekwu "enweghị Mercury." Site na iwu, ị ga-ejide n'aka na ọ nweghị n'efu Mercury. N'aka nke ọzọ, ọ nwere ike ịbụ na mmiri mmiri ahụ bụ ọlaọcha na enweghị ederede ọ bụla na-ekwu ihe ọ bụla na ọ nweghị Mercury. Ọ bụrụ na nke a emee, ọ ga-abụ Mercury.
Ihe mbụ ndị mmadụ na-ajụ onwe ha bụ ihe ha ga-eme ma ọ bụrụ na iko ya agbaji. Mgbe nke a mere, ị gaghị eji ihe nhicha ọkụ ma ọ bụ broom hichaa ya. Kwesighi iji aka aka gị mee ya ma ọ bụ wepụ mmiri mmiri n'ụlọ mposi ma ọ bụ sink. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike imetọ ọtụtụ puku lita mmiri na-enweghị isi. Ọ bụ ihe mmetọ dị ukwuu nke nwere ike imebi nnukwu ihe na obere. Ndabere nke ihe a pụtara na mgbe ọ dara n'ala ọ na-ekewa n'ime obere tụlee ma gbasaa n'akụkụ ọ bụla.
Mgbe a temometa na-ama esịn na mmiri mmiri-apụ, ọ kachasị mma ịhapụ ụmụaka na anụ ụlọ ka ha pụọ ​​na mpaghara ma mepee windo ma ọ bụ ọnụ ụzọ ka ha nwee ikuku n'ụlọ. Ọ bụrụ na anyị nọ n’ebe dị larịị ma dịkwa ire ụtọ ọ ga-adị mfe ihicha. Ikwesiri iji akwa, gloves na nkpuchi iji hichaa ya. Echefula ilele niile mercury tụlee na ala nke ọma, ebe ọ bụ na ọ dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na ịhapụ ntakịrị tụlee ma metụ ma ọ bụ iku gas na-egbu egbu ọ nwere ike ibute nsị, mmebi ụbụrụ, nsogbu nri na akụrụ.
Enwere m olileanya na site na ndụmọdụ ndị a ị nwere ike ịmụtakwu banyere temometa nke mercury ma kpachara anya ma ọ bụrụ na ị ka na-eji ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Temometa Mercury
Ya mere, ebe ọ bụ na a ka na-ekwe ka iji amalgam emezigharị eze, ọ na-emegiderịta onwe ya, na mmetọ karịa karịa mercury karịrị n'ọnụ!
Jikọrọ ọnụ jikọrọ ọnụ